Vesatry Ny Fanaovana Politika, Fanazavana Ny Fifidianana Any Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Vesatry Ny Fanaovana Politika, Fanazavana Ny Fifidianana Any Kamerona
Voadika ny 03 Oktobra 2013 23:39 GMT
Raha toa ka mihazakazaka mametraka ny taratasy filatsahan-kofidiana ho Solombavam-bahoaka [fr] Kamerone ireo mpifaninana sasany ary miezaka mandresy lahatra ireo mpifidy amin'ny fampanantenana mahazatra amin'ny fifidianana ny ho mpanolotsaina monisipaly, dia manandrana mividy izany amin'ny vola sy ny fanomezana toy ny labiera sy voanjo ny sasany.
Maro amin'ireo mpifaninana hofidiana tamin'ny 30 Septambra 2013 no solafaka tsy nahavita nanome sehatra tsara rafitra mba hahafahan'ireo mpifidy mahafantatra ny toerana misy ireo mpirotsaka manoloana ny olana. Hatramin'ny nanombohan'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 15 Septambra 2013, dia tsy mandre izay marina avy amin'ireo mpifaninana marobe ireo ny Kamerone mpanaraka ny fifaninanana.
Toy ny nambaran'i Crescence Nyindi tamin'ny lahatsoratra [fr] iray nivoaka tao amin'ny Echos des Grands Lacs ( Akon'ny Farihy Lehibe) :
Tsy zavatra mora ho an'ireo antoko politika mifaninana ny manolotra fandaharan'asa mirindra.
ireo departemanta ao Kamerona isaky ny faritra – Sehatra ho an'ny daholobe
Mampalahelo ny tsy fisian'ny tetikasa sy ny zava-baovao amin'ny fandaharan'asan'ireo antoko politika sasany, manjary mampametra-panontaniana amin'ny zavatra rehetra.
Asehon'i Mathias Mouendé Ngamo, bilaogera, anatin'ny lahatsoratra [fr] ao amin'ny bilaoginy ny fandaharan'asan'ny Cameroon People's Party (CPP) na Antokon'ny Vahoaka Kamerone an'i Edith Kah Walla, “izay mitady ny seza 132 amin'ireo fifidianana monisipaly ireo ” any amin'ny fari-pitantànana ato amin'ny firenena, ao anatin'izany ny Distrika voalohan'i Douala. Mizara telo miavaka tsara ny fandaharan'asa : ara-politika, ara-toekarena ary ny ara-tsosialy. Ohatra, tian'ny antoko ny :
hampianatra momba ny Teknolojian'ny Filazam-baovao (solosaina ) ho an'ny tanora 1000 isan-taona, ” mba hahazahoan'izy ireo ny fahaiza-manao vaovao takian'ny fandraharahàna.
Heverin'ny mpifaninana fa tsy mbola manana tanora ampy voaofana sy manana fahaiza-manao amin'ireo sehatra ireo ny firenena.
Miombon-kevitra amin'izany koa ny mpifaninana avy amin'ny Social Democratic Front , izay mampanantena [fr] :
Asa sy fampianarana misimisy kokoa ho an'ny tanora.
Tsy hitan'ireo mpifaninana avy ao amin'ny Vondrona Demokratikan'ny Vahoaka Kamerone (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), ilay antoko mpitarika, ny antony hitondràna zava-baovao. Aleony nanaraka ny zavatra efa nisy taloha. Tahaka izany ny nataon'ny mpifaninanan'ny CPDM ho fidiana ho Ben'ny tanànan'ny boriborintany faha-4 ao Yaoundé [fr], izay te-hanohy ny asa efa natombony nandritra ny fotoam-piasany teo aloha.
Yaoundé, renivohitr'i Kamerona – Sehatra ho an'ny daholobe
Fa ny loza dia ampiasain'ireo mpifaninana ireo ny fomba fanao tsy madio loatra tsy manalavitra ny fanaovana kolikoly mba hisintonana ny fahatsoran'ny mpifidy. Aleon'izy ireo maka fanahy ny olona amin'ny labiera sy ny sakafo, toy izay hanolotra drafitr'asa mendrika izany anarana izany sy manova ilay antsoiny hoe fivoriana momba ny fifidianana ho lasa fetibe, araka ny hanazavan'i Joseph Olinga izany amin'ity lahatsoratra ity, notsongain'ny cameroun24.net:
Nanao fampielezan-kevitra tao an-tsena tany Douala ny mpifaninana iray fanta-daza ho solontenan'ny vahoaka. Niresaka taminà mpivaro-boanjo, ary nividy ny voanjo rehetra nentin'ilay mpivarotra ilay mpifaninana rehefa avy nanao fitsidihana fohy ireo fotodrafitr'asa tao anatin'ny horakoraka. Zavatra tsy fahita andavan'andro. Nampanantena “am-pahibemaso” ilay vavy antitra izay hita ho vahotra fa hifidy azy. Avy hatrany dia nozaraina tamin'ireo 4'mi teo akaiky teo ilay sakafo novidiana. Ary ny fahitana fa mila labiera tsara ny fihinana ireny voan-javatra ireny, dia namoaka vola 100.000 CFA (1.134 dolara Amerikana) teo no eo mba hividianana ilay “rano tena tsara” ilay mpifaninana, amin'izay hita fa manaraka ny fomba amam-panaon'ilay toerana. Horakoraka, tehaka mirefodrefotra, ary avy eo nifarana ny fivoriana. Tao anatin'ny fanankinana tamin'Andriamanitra sy ny fitsofan'ny vahoaka rano ilay mpifaninana izany rehetra izany.
Notsipihany fa misy zavatra miverina foana mandritra ny fampielezan-kevitra :
Najanon'ny mpifaninana fanta-daza iray avy amin'ny antoko mpanohitra ny fiarany. Vetivety teo dia nitangoronan'ny mpitondra moto-taksi, mpivarotra ary olona liana maro ilay “Mesia”. “Antenaiko fa hifidy ny lisitray ianareo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana monisipaly,” hoy izy tamin'ireo (avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra). Fanontaniana ve izany ? ” Hevero ho toy ny efa lany ianareo” hoy ny vahoaka. Nisy antontam-bola nomena izay olona lehibe indrindra teo. Nozaraina ny sary lehibe, tehaka niraradraraka ary avy eo dia nirava ny fivoriana. Niverina teny amin'ny fiarany ilay mpifaninana ary narahanà moto-taksi am-polony mihira ny hira malaza namboarina ho fanomezam-boninahitra an'ilay mpifaninana ho solombavam-bahoaka.
Seho tsy takatry ny saina, izay mampiseho tsara ny haratsian'ireo “politicars” (mpanao politika maloto), mpanao politika mpiray tsikombakomba mangetaheta fitondràna, araka ny ilazàn'i Franck William Batchou, mpitoraka bilaogy azy ireo. Natao hanafenana ny tsy fisian'ny fandaharan'asa politika ny fitondrantenan-dry zareo, ary rehefa hitarina izany dia azo iheverana hoe tsy tsapan'ny Kamerone ny havesa-danjan'ireo fifidianana ireo sy ny dikan'ny vatony. Soa ihany fa tsy adala daholo ny olona.
Nanapa-kevitra ny handray an-tànana ny raharaha ny olona tamin'ny fanontaniana ireo mpifaninana ny momba ny zavatra manavesatra ny fony, manoloana ny fikorontanan'ny fandaharan'asa. Marina ho an'ny vondron'olon-tsotra izany, izay te-hisarika ny sain'ireo mpifaninana hijery ireo olana ara-pahasalamana atrehan'ny Kamerone maro , amin'ny alàlan'ny tetikasa ” fahasalaman'ny vata fandatsaham-bato” (santé aux urnes). Antso izay antenainay fa tsy ho any an-tsofin'ny marenina.
Fa na inona na inona no mitranga, ny mpifidy no tompon-teny farany. Ara-poto-kevitra fara-faharatsiny.